भुलेर पनि नगर्नुहोस् मंगलबारका दिन यी ५ काम
मंगलबार भगवान गणेशको दर्शन आराधना गर्नाले सबै कार्य शिद्धि हुने शास्त्रीय मान्यता छ।
मंगलबार तथा शनिबार क्रु’र अर्थात पा’पी बारको श्रेणीमा पर्छन् । मंगलबारलाई अत्याधिक क्रु’रबार मान्दै शास्त्रमा यसलाई शरीरमा रक्त सञ्चार गराउने धमनीसँग सम्बन्धित मानिएको छ । मानिसको शरीरमा हुने रातो पदार्थ मंगलसँग सम्बन्धित मानिन्छ ।
कालपुरुष सिद्दान्त अनुसार प्राणीको हाड र र’क्त तथा मज्जा मंगलसँग सम्बन्धित छ । मंगललाई सबै ग्रह मध्ये क्रु’र र र’क्तपातको ग्रह मानिएको छ । मंगलको रातो रंग मृ’त्यु वा रग’त सँग हुन्छ । धर्म शास्त्रका अनुसार मंगलबारको दिन निम्न काम बर्जित गरिएको छ ।
२– मंगलबार कुखुरा वा अन्य पंक्षीको ह’त्या गर्दा मानिसको बुद्धी भ्रमित हुने मानिन्छ ।
३– मंगलबारको दिन माछा खाँदा तपाइँलाई आर्थिक नोक्सानी हुने मानिन्छ ।मंगलबार मासु पनि सेवन गर्नु हुँदैन । मासु खाँदा कुटुम्बको क्ष’य हुन्छ ।
४– मंगलबारको दिन मदि’रा से’वन गर्दा तपाइँको क्रो’धमा वृद्धी हुन्छ ।
५– मंगलबार झ’गडा गर्दा बेइज्जत हुने खतरा हुन्छ ।
४. मंगलबार जन्मने व्यक्तिहरु गलत कुराहरु सहन नसक्ने भएका कारण उनीहरुलाई रि’स पनि धेरै नै उठ्ने गर्दछ ।
५. यी व्यक्तिहरुसँग निकै धेरै लुगा, गाडी, घरलगायत विलासिताका सबै सामग्रीहरु हुने गर्दछ ।
६. यस्ता व्यक्तिहरु इमान्दार हुने गर्दछन् र साँचो कुरा बोल्ने गर्दछन् जसकारण आफ्नो बलबुँतामा नै सफलता हाँसिल गर्ने गर्दछन् ७. यिनिहरु सामाजिक हुँदैनन् र भगवानमाथि विश्वास राख्ने गर्दछन् ।
१०. उनीहरुको वैवाहिक जीवन निकै सुखमय तरिकाले व्यतीत हुने गर्दछ ।